Mahad Salaad oo farriin u diray RW Rooble | KEYDMEDIA ENGLISH
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa ku biiray shaqsiyaadka durba cabashada ka muujiyay habka ay maamullada qaar dib ugu billaabeen hannaanka doorashoyinka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wax yar ka dib markii Sagaalkii bishaan Jannaayo, lagu heshiiyay habraacyada doorashooyinka dadban, ayay soo baxayaan tabashooyin badan iyo eedo ka dhan ah habka ay doorashdu dib ugu billaabatay.
Qeylo-dhaan ka soo askuntay Puntland ayaa u muuqata in ay si guud isku qabsatay maamullada oo dhan, waxaana markaan cabasho muujinaya shaqsiyaad ka ag-dhow Ra’iisul Wasaaraha dalka, kaas oo haya hoggaanka doorashooyinka.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, oo ka mid ah xubnihii baarlamaankii 10-aad ayaa Ra’iisul Wasaare Rooble, ugu baaqay inuu isku howlo dhaqan galinta habraacyadii lagu heshiiyay, wax yar kadib markii MW, KGS, Laftagareen uu muujiyay inuu halkiisa ka sii wadayo boobka doorashada.
“Ra’iisul Wasaare Mohamed Hussein Roble waxa looga fadhiyaa dhaqan gelinta habraacyadii lagu heshiiyay 9 bishaan. Hadii kale maamullada faraha halaga wada qaado, qolo waliba ha soo xulato cidii iyadu ay rabtee”. Ayuu yiri Mahad Salalad.
Inkastoo Mahad uu yahay musharrax u taagan baratanka kursiga Golaha Shacabka ee Hop147, oo laga soo doorto Galmudug, haddana hadalkaan ayaa loo fasirtay inuu ku wajahan yahay kuraas maanta lagu doortay Baydhabo, oo ay ku soo baxeen musharixiin la xijinayo dhanka Farmaajo.
Sidoo kale, hadalkaan ayaa ku soo beegmay qeylo-dhaan ka soo yeertay Puntland iyo Jubbalnd, halkaas oo musharrixiinta qaar sheegeen in Siciid Deni iyo Axmed Madoobe, durba ku tunteen habraacyadii lagu hesheeyay.
Dadka siyaasadda falaqnqeeya ayaa rumeysan in Xisbiga uu hoggaamiyo MW hore Xassan Sheekh Maxamuud ee UDP, ay ka socotay farriinta maanta ee Mahad Salaad, maadaama musharixiin xisbigu gadaal ka riixayay soo bixi waayeen, kadib culeys ka yimid dhanka Laftagareen.